Voadika ny 02 Jona 2009 14:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, македонски, Español, عربي, বাংলা, English
Sary nindramina tamin'i donknuth
Ao anatina tontolo iray efa tena misandrahaka be, mbola taraiky any aoriana any foana i Siria; nialoha kely ny taona 2000 dia niseho vahoaka ny aterineto ary ny taham-pitsofohana amin'izao fotoana dia manodidina ny 17%. Na izany aza anefa, ny maro amin'ireo mpampiasa ny aterineto dia mbola mitohy mizaka hatrany ny filonan'ny modem 56k noho ny fandrakofan'ny ‘haut-debit’ mbola tsy mahenika ny firenena manontolo. Tamin'ny 2001 ireo tamba-jotran'ny finday no nahazo ny fahazoan-dàlana hiasa tao Siria, ary nanomboka tamin'ny andro voalohany, dia nampita ny akon'ny tsy fahafaham-pon'ireo mpanjifa ireo mpampita vaovao isan-karazany manoloana ny vidin'ny tolotra. Ny fahasahiranana sedrain'ny orinasan-tserasera Siriana dia tondroina ho avy amin'ny ankivy ampiharin'i Etazonia amin'ny firenena no antony betsaka ary koa ny kolikoly misy eny anivon'ireny orinasan-tserasera siriana ireny
Nanapa-kevitra ny mpitoraka blaogy fa leo ireo sarany ankehitriny sy ireo tolotra omen'ny mpandraharaha siriana – Syriatel sy MTN Syria [ar] eo amin'ny sehatra fifandraisan-davitra izy ireo. Ny fitroatran'izy ireo dia nàka endrika fanaovana an-kivy ireo kaompania ny 01 jona, araka ny tatitry [ar] ny mpampita vaovao any an-toerana.
Ireo nanainga ity hetsika ity dia samy nandefa ity hafatra manaraka ity:
Fanaovana ankivy ny finday ny 01 Jona 2009
Mandraisa anjara miaraka aminay amin'ny fanentanana manerana ny firenena izay ataonay mba hanerena ireo orinasan-tserasera hampidina ny vidin'ny tolotra ataony hitovy tàntana amin'ireo izay ampiharina any amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina […] Mandraisa anjara miaraka aminay ka aparitaho ny vaovao hipàka amin'ny olona maro araka izay tratra.
Anarchist Queer dia nitondra ny fanohanany tamin'ny filazàna fa [ar]:
Ho ahy, manao ankivy ny kaompania aho, tsy noho ny saran'izy ireo lafo fotsiny, fa noho ireo tetika feno fitapitaka ataon'izy ireo amin'ny mpanjifany, [izay] izaho no vavolombelon'izany nandritra ny fianarana asa nataoko tao amin'ny MTN talohan'ny nametrahako fialana.
Ary ao amin'ny Twitter i Salamm milaza hoe[ar]:
“Tiako be ilay Fanentanana ho fanaovana ankivy ny Finday, ary dia naeliko tamin'ny manodidina ilay izy (ivelan'ny aterineto) Tsara lavitra kokoa izy ity raha naharitra mihoatra ny andro iray.”
Aty am-parany, Somar avy amin'ny Syria Talk no nilaza ho valin'ny fanamarihana iray fa:
Ny tena zava-dehibe, dia ny fahatsapan'ny tanora rehetra fa singa iray ihany isika rehetra, tsy ijerena finoana na vondrom-pinoana sekta, tsy maintsy mivondrona isika mba hanatsaràna ny toe-draharaha iainantsika… raha mbola natao ho antsika rehetra koa ny fandrosoana.
23 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana